३८ क्वीन्टल सुन लगानीका मुख्य मालिक एमके अग्रवालको घरमा भेटियो ३२ …. – Ranga Darpan
३८ क्वीन्टल सुन लगानीका मुख्य मालिक एमके अग्रवालको घरमा भेटियो ३२ ….
जेठ २५ – एमके अग्रवालको घर अनामनगरस्थित प्रहरीले छापा मारेको छ ।, एमके अग्रवाल अहिले सम्म देखियको ३८ क्वीन्टल सुन खरिदका मालिक हुन्। उनि अहिले सम्म फरार छन्।
, प्रहरीले उनको घरमा छापा मारे लगतै ,३० लाख नगद . २ किलो चाँदी र १० तोला सुन बरामद गरियको छ। , साथै उनको घरबाट सुन ओसार्ने जाकेट पनि बरामद भयको छ। ,प्रहरीले उनको घरबाट बा १० च २८२ नम्बरको गाडीसहित अन्य केही महत्वपूर्ण कागजातहरु र सुन राख्ने डिब्बा बरामद गरेको दाबी गरेको छ ।
एमके अग्रवाल भारतमा लुकेर बसेको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। ,प्रहरीले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरे लगतै उनको घरमा ताला लगायर फरार भयका छन् ।, उनकी स्वास्नीले सुन कतै लुकायरा राखेको हुन सक्ने पनि प्रहरीको प्रामभिक अनुसन्धान स्रोतले जनायको छ ।,सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–३ स्थायी घर भएका अग्रवाललार्इ छानबिन समितिले उनलार्इ नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
यसअघि प्रकरणमा पक्राउ परेका राप्रपा (प्रजातन्त्रिक) का नेता भुजुङ गुरुङले गृह मन्त्रालयका सह-सचिव र्इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको समित समक्ष बयान दिने क्रममा ३३ किलो सुनको लगानीकर्ता मोहनकुमार अग्रवाल भएको बताएका थिए ।
‘साढे ३३ किलो सुनमा मोहन अग्रवाल ‘एमके’ले लगानी गरेका थिए’,। जिल्ला अदालत मोरङमा पेश भएको अभियोग पत्रमा भुजुङले पनि कमिसन पाउने गरेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा गर्जिय कांग्रेस नेता सभापति शेर बहादुर देउवा ,
नेपालमा बढ्दो माग पार्कर पेनको मूल्य ८ हजार ,,